Bumbiro remitemo yenyika, pamwe nemitemo yesarudzo, zvinopa mutungamiri wenyika simba rekutara zuva richaitwa sarudzo uye bumbiro rinotarawo nguva inofanira kuitwa sarudzo idzi.
Section 43(1) yebumbiro inoti hupenyu hweparamende makore mashanu uye hupenyu hweparamende hunotanga kubva zuva rinogadzwa mutungamiri wenyika.
Izvi zvinoreva kuti paramende iripo inomira kushanda pakati pehusiku musi wa21 Nyamavhuvhu gore rinouya sezvo VaMugabe vakatora mhiko yekutungamira nyika musi 22 Nyamavhuvhu muna 2013.
Section 158 inotiwo sarudzo dzinofanirwa kuitwa pasingadariki mazuva makumi matatu hupenyu hwehurumende husati hwapera.
Vesangano reVeritas vanove nyanzvi munyaya dzemutemo vanoti izvi zvinoreva kuti sarudzo dza2018 dzinogona kuitwa mukati memazuva 23 Chikunguru na21 Nyamavhuvhu gore rinouya.
Mutemo unoti panofanira kuva nemazuva asiri pasi pemakumi mana nemana kana anodarika makumi masere nemana pakati penguva inotaurwa zuva resarudzo nemusi unoitwa sarudzo dzacho.
Ongororo yaitwa neStudio7 yaratidza kuti kunyange hazvo mapato anopikisa ari kuchemera kuti pave neshanduko maererano nemafambisirwo esarudzo, sarudzo dzinogona kuitwa pasina shanduko iyi.
Mutauriri webato reMDC inotungamirira naVaWelshman Ncube, VaKurauone Chihwai, vanoti havasi kufara negadziriro yesarudzo idzi iri kuitwa nekomisheni yesarudzo, yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC.
Munyori mukuru webazi revechidiki mubato reMDC inotungamirirwa naVaMorgan Tsvangirai muHarare, VaDenford Ngadziore, vanoti kunyange hazvo vange vari kushanda neZEC mukugadzirisa mafambisirwo achaitwa sarudzo dza2018, havasi kufarawo nekuti ZEC yave kutadza kutevedza hurongwa hwayo.
Pahurongwa hwayo hwayakatura kuparamende, ZEC ingadai yakatotanga kunyoresa vavhoti ichishandisa BVR asi izvi hazvisati zvaitika.
Asi vanoti vane tariro yekuti ZEC ichaita zvimwe zvavakabvumirana nayo zvakaita sekuti zvimbo dzekuvhotera hadzifaniri kunge dziri munzvimbo dzakaita semakamba emapurisa kana masoja kana pamisha yevanhu sezvaiitika musarudzo dzapfuura.
Mutauriri wePeople’s Democratic Party, VaJacob Mafume, vanoti nyaya yekuti gadziriro yesarudzo haisi kufambiswa zvakanaka ndiyo yaita kuti vashandire pamwe mukuedza kugadzirisa zvinhu.
Mutauriri weMDC inotungamirirwa naVaTsvangirai, VaObert Gutu, vanoti kunyange hazvo paine chikiribidi chiri kuitwa neZEC, vari kutogadzirira sarudzo idzi.
Vanoti bato ravo riri kugadzirira sarudzo dza2018 zvakanyaya mumatunhu ese munyika.
VaMafume vanotiwo mapato anopikisa ari kuita mushandira pamwe kuti akwanise kukunda Zanu PF musarudzo dzegore rinoouya.
Pahwaro hwayo hwayakatura kuhurumende, ZEC yakati yaida kutanga kunyoresa vavhoti muna Kubvumbi asi kusvika pari zvino haisati yatanga kuita izvi.
Vanongorora zvematongerwoenyika, VaVivid Gwede, vanoti hapana chinoshamisa pane zviri kuitika kuZEC uyewo vanoti zviri pachena kuti komisheni iyi iri kushanda nebato riri kutonga reZanu PF.
Zanu PF yakatotanga gadziriro dza2018 uye pari zvino yakatotenga motokari mazana matatu nemakumi matanhatu neshanu dzekushandisa pasarudzi idzi.
VaGwede vanoti mapato anopikisa haangafananidzwi neZanu PF sezvo ichishandisa mari dzehurumende.
Hatina kukwanisa kutaura neveZEC kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi.